Caqabadaha deegaanka ee sanadkan iyo kuwa soo socda! | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | Kaydinta tamarta, Ecology, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Deegaanka, Teknolojiyada cusub
In ka badan abid taariikhda aadanaha, waxaan ku dhex jirnaa gacmaheena mustaqbalka meeraha sidaan ognahay oo waxaan la kulannaa taxanayaal caqabado xagga deegaanka ah.
Marka xigta waxaan arki doonaa caqabadahaani iyo kuwa dhib leh inay keeni karaan.
1 Caqabadaha ugu waaweyn ee deegaanka
2 Tirada dadka
3 Kalluumaysiga xad dhaafka ah
4 Xaalufinta Kheyraadka Macdanta
5 Mustaqbalka adduunka gacmaheena
Caqabadaha ugu waaweyn ee deegaanka
Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnaa caqabado dhowr ah oo taas ah hanjabo mustaqbalkeena bulsho ahaan:
Kobaca dardar geliyay ee dadweynaha
El daal kheyraadka macdanta.
Ka faa'iideysiga xad dhaafka ah ee Kheyraadka kalluumeysiga iyo caburinta badaha.
Kordhinta wasakheynta carrada iyo biyaha.
Dhimashada dhowr noocyada.
Soo saarista ballaaran ee gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo aqalka dhirta lagu koriyo oo sababa kuleylka adduunka ee baahsan.
Oktoobar 30, 2011 waxaan kor u dhaafnay 7000 bilyan oo ku nool meeraha.
Sannadkii 2016-kii waxay hore uga bateen 7400 haddana waxaan durba ka sarreynaa 7500 milyan (7.504.796.488 si sax ah waqtiga qorista qoraalkan sida ku cad Worldometer).
Sida lagu saadaalinayo saadaasha rasmiga ah, sanadka 2050-ka oo hadaan wax isbedelin, aad ayey macquul u tahay in 10.000 bilyan la gaaro.
10.000 bilyan oo qof oo doonaya inay wax cunaan, wax cabaan, xirtaan, safraan, beeraan iwm.
Taasi waxay cadaadis saareysaa nidaamka deegaanka iyo kheyraadka sida aan hore loo arag. Tusaale saamaynta ay korodhay dadkani waxay ku leedahay nidaamka deegaanka waxaan ku leenahay kaluumeysiga
Kalluumaysiga xad dhaafka ah
Maaddaama dhadhanka cunnada ay sii kordheen epicurean iyo caalamiyeeyay, xiisaha sushi iyo cuntada badda iyo kalluunka guud ahaan waxay noqdeen kuwo caalami ah.
Wadamada sida Spain oo kalluunka markii horaba qayb ka ahaa muhiim u ah cuntadeena, ayaa kaliya kordhiyay isticmaalkan isla markaana ka dhigay xitaa mid aad u ballaaran.
Horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa suurto galisay cun kaluun cusub meel kasta oo dalka ka mid ah. Laakiin isbeddelkani wuxuu ku batay meeraha oo dhan, taasoo keentay in maraakiibta kalluumeysiga inay aadaan kalluumeysi goobaha kalluumeysiga oo aad uga fog.
Dhibaatada jirta ayaa ah in saadaashaani ay saameyn ku yeelatay awooda taranka ee badaha, sidaa darteedna ay heerka ugu sarreeya qabashada dhammaan goobaha kalluumeysiga meeraha.
Tani waa saameyn had iyo jeer u dhacda si isku mid ah; Maaddaama qabashada ay ku sii kordheyso meel cayiman, soosaarka kalluunka aaggaas wuu kordhayaa illaa uu gaaro ugu badnaan ka dib markaasi oo kalluunka qabta ay yaraadaan oo aysan ku noqon gaadho ugu badnaan mar kale.
Hagaag, sanadkii 2003 waxay horey u gaadhay qabashada ugu badan ee dhamaan badaha aduunka. Sababtaas awgeed ayaa beeraha kalluunka ay u tarmeen sida a beddelaad si ay u sii yaraato qabashada badaha.
Taasi sidoo kale waa sharaxaad ku saabsan waxa aan heli karno noocyo badan oo badan ee kalluunleyda aan la cunin ilaa dhowr sano ka hor.
Xaalufinta Kheyraadka Macdanta
Dhulkeenu wuxuu leeyahay cabirro iyo a tirada ee kheyraadka la go'aamiyay oo xaddidan. Qaabka isticmaalka kheyraadka, iyagoo iska dhigaya inay iska indha tirayaan inay daalayaan, marka lagu daro darro, ayaa si toos ah caddaalad darro ugu ah jiilalka soo socda.
Marka macdan laga soo saaro dhulka mar dambe lama soo saari karo. Sidaa awgeed isticmaalka mas'uul ka ah in la qabtay ay aad muhiim u tahay iyo in mowqifka kaliya ee macquul ee mustaqbalka uu yahay aasaasida nidaamka dhaqaalaha wareeg ah oo dhab ah sida habkaas aan loo cunin laakiin loo isticmaalo.
Tan macnaheedu ma aha oo kaliya in waxyaabaha dib loo warshadeeyo, laakiin marka ay yihiin naqshadeynta iyo soosaarka Horey ayaa loo tixgeliyey in isticmaalka kadib kheyraadkan aan dib loo cusboonaysiin karin ay tahay in dib loo isticmaali karo.
Mustaqbalka adduunka gacmaheena
Runtu waxay tahay in kasta oo ay jiraan caqabadaha noocan oo kale ah ee u muuqda kuwo aan macquul ahayn iyo in kasta oo hanjabaadahaas apocalyptic, maanta waxaan haysannaa qalab ka badan sidii hore si looga gudbo caqabadahaas oo dhan.
Aqoonta jirta maanta ee waxa inagu dhaca, sababta ay noogu dhacdo iyo sida xal loogu helo ka weyn yahay weligiis.
Waxaan gacanta ku haynaa qalabkii aan kor ugu qaadi lahayn a qaabka horumarka kale. Waxaa laga yaabaa in sababtaan iyo nooc ka mid ah fekerka rabbaaniga ah, waxaan nahay kuwa ay tahay inaan wajahno caqabadda ugu weyn ee uusan Bani'aadamku horay u soo marin:
Isbedelka Cimilada ee uu sababay kulaylka caalamiga ah waxaa keenay dadaalka aan ugu jirno in aan u siidno hawo kaarboon laba ogsaydh qaab aad u foolxun 150kii sano ee ugu dambeeyay.
Warka fiicani waa inaan nahay jiilka koowaad si aan u helno aaladaha lagu joojiyo hanjabaadan isla markaana loo toosiyo habka aan ugu noolahay meerahan mid ka fogaanaya waxyeelada ugu badan.
Xun waa in aan u badan tahay inaan noqon doono kuwa ugu dambeeya in aad ku dabaqi karto dammaanad guuleysi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Caqabadaha deegaanka ee 2017
Ku dhowaad 30 dacwadaha la sugayo ee jarista tamarta la cusbooneysiin karo ee ICSID
Tamarta dhuxusha iyo cawaaqibkeeda il tamar ahaan